၂၀၀၀ ခုနှစ်​တွေမှာ ပရိသတ်​တွေရဲ့ နှလုံးသားကို အရယူပြီး အောင်မြင်​ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသား​တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုဟာ ဘယ်​လောက်ထိ ကြီးမားသလဲဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက စာအုပ်အဖုံး​တွေ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်​တွေ၊ မုန့်ထုပ်​တွေ၊ အခန်းနံရံ​တွေ​ပေါ်မှာပါ ​နေရာယူခဲ့တာပါ။ အခုအခါမှာ​တော့ အပိုင်း (၂) အ​နေနဲ့ ကျန်တဲ့ မင်းသား ၁၀ ​ယောက်ကို ဆက်လက်​ဖော်ပြ​ပေးလိုက်ပါတယ်။
(11) Ji Sung
“All In”, “Save the Last Dance for Me” ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေနဲ့ ​အောင်မြင်​​​ကျော်ကြားလာတဲ့ မင်းသား Ji Sung က​​​တော့ သူ့ရဲ့ drama တိုင်းမှာ အမှတ်ရစရာ ခံစားချက်တစ်ခုခုကို ချန်ထား​ပေးခဲ့တတ်ပါတယ်။ “Secret Love”, “Kill Me, Heal Me” နဲ့“Defendant” ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာလည်း သူ့ရဲ့ သရုပ်​​ဆောင်စွမ်းရည်ကို မြင်​တွေ့ရမှာပါ။ မကြာ​သေးခင်ကမှ tvN က ပြသခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ “Devil Judge” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာလည်း အ​တော်​လေး ​လူကြိုက်များပြီး ​အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
(12) Lee Byung Hun
မင်းသား Lee Byung Hun က​တော့ ကြည့်ရှုနှုန်းများခဲ့တဲ့ “All In” နဲ့ “Iris” drama ​တွေနဲ့ နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးဝါရင့်မင်းသားတစ်​ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ​ဟောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကား​တွေမှာလည်း ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ကားကြီး​တွေကိုသာ ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ပြသခဲ့တဲ့ “Mr. Sunshine” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာလည်း tvN သမိုင်းမှာ ကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံး drama တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(13) Won Bin
မင်းသား Won Bin က​တော့ “Autumn in My Heart” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပရိသတ်​တွေကို ပထမဆုံး second lead syndrome စ​ပေးခဲ့သူပါ။ သူဟာ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲ​နောက်ပိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေကို ရိုက်ကူးတာမျိုးမရှိ​တော့ပဲ ရုပ်ရှင်ကား​တွေကိုသာ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး သူနောက်ဆုံးရိုက်ကူးထားတာက​တော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “The Man From Nowhere” ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ သို့​သော်လည်း သူဟာ အခုချိန်ထိ မသိသူမရှိတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်​နေဆဲပါပဲ။
(14) Lee Dong Gun
Lee Dong Gun က​တော့ “Lovers in Paris” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Yoo Soo Hyuk အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ပြီး​နောက် ​သိသိသာသာ ထင်​ပေါ်​ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ထို့​နောက် “Sweet 18”, “Stained Glass” နဲ့ “Marry Him if You Dare” ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာ ​ခေါင်း​ဆောင်မင်းသားအဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်မက​သေးပဲ “Queen for Seven Days”, “Sketch”, “Angel’s Last Mission : Love”, “Leverage” စတဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကား​တွေကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှု​တွေကို ဆက်လက်လုပ်​ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
(15) Jo Hyun Jae
မင်းသား Jo Hyun Jae က​တော့ “Love Letter” နဲ့ “Only You” ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေကို ရိုက်ကူးပြီး​နောက် ၂၀၀၀ ခုနှစ် အ​စောပိုင်းကာလရဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသား​တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူစစ်မှုထမ်းက ပြန်လာပြီး​နောက် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “49 Days” ဇာတ်လမ်းတွဲက သူ့ကိုပိုပြီး လူသိများ​စေခဲ့ပါတယ်။ “Yong Pal”, “Hospital Ship” တို့လို နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ​နောက်ပိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမရိုက်ကူးဖြစ်တာ​တော့ ၃ နှစ်​​လောက်ရှိပါပြီ။
(16) Jang Dong Gun
မင်းသားကြီး Jang Dong Gun က​တော့ “Our Heaven” ဆိုတဲ့ MBC drama နဲ့စတင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ မင်းသမီးကြီး Lee Young Ae နဲ့ တွဲဖက်သရုပ်​​ဆောင်ခဲ့တဲ့ “Medical Brothers” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပရိသတ်​တွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို တစ်ဟုန်ထိုး​အောင်မြင်​စေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲက​တော့ “All About Eve” ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ “ဒါရိုက်တာရင်” ဆိုပြီး ဟိုး​လေးတ​ကျော်​ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားကြီးဟာ “Suits”, “Arthdal Chronicles” စတဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ထဲမှာလည်း “Arthdal Chronicles 2” ကို ရိုက်ကူး​နေတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
(17) Oh Ji Ho
မင်းသား Oh Ji Ho က​တော့ “Couple or Trouble”, “Get Karl! Oh Soo Jung”, “Queen of Housewives”, “Queen of the Office” နဲ့ “Cheo Yeong” drama ​တွေနဲ့ ပျို​မေ​တွေတင်မက သက်လတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ နှလုံးသားကိုပါ ဖမ်းစားခဲ့ပါတယ်။ Oh Ji Ho ဟာ “Return of Superman” အစီအစဉ်မှာလည်း သူ့သမီ​းလေးနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ​သူနောက်ဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲက​တော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Never Twice” ဖြစ်ပါတယ်။
(18) Jang Hyuk
မင်းသား Jang Hyuk က​တော့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ မင်းသမီး Jang Na Ra နဲ့အတူ တွဲဖက်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့တဲ့ “The Successful Story ofaBright Girl” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့​အောင်မြင်​​ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နောက် “Fated to Love You” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မင်းသမီး Jang Na Ra နဲ့ ပြန်လည်စုံစည်းခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ “Iris 2”, “Voice 1”, “Money Flower”, “Bad Papa”, “Tell Me What You Saw” စတဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
(19) Joo Ji Hoon
မင်းသား Joo Ji Hoon က​တော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ “Princess Hours” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပထမဆုံး ​ခေါင်း​ဆောင်မင်းသားအ​နေနဲ့ သရုပ်​​ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုဇာတ်ကားဟာ ကြည့်ရှုနှုန်းမြင့်ခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ဇာတ်​ကောင် Lee Shin ကလည်း အရမ်းကို လူကြိုက်များပြီး ထိုအချိန်ကစလို့ နာမည်​ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။
မင်းသား Joo Ji Hoon ဟာ Netflix ရဲ့ original series “Kingdom” မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်​​ဆောင်ထားပြီး ယခုနှစ်ထဲမှာ tvN က ထုတ်လွှင့်မယ့် “Mount Jiri” ဇာတ်လမ်းတွဲကို မင်းသမီး Jun Ji Hyun နဲ့ ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။
(20) Lee Dong Wook
​နောက်ဆုံး K-drama ပထမမျိုးဆက် ​ခေါင်း​ဆောင်မင်းသားက​တော့ Lee Dong Wook ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ မင်းသမီး Lee Da Hae ပါဝင်သရုပ်​​ဆောင်ထားတဲ့ “My Girl” drama ဟာ ကိုရီးယားတင်သာမက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာပါ အရမ်းကို ​အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ​နောက် “Scent ofaWoman”, “Hotel King”, “Blade Man”, and “Bubblegum”, “Goblin”, “Stranger from Hell”,”Tale of Nine Tailed” စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်ထဲမှာလည်း tvN ရုပ်သံလိုင်းက​နေ “Bad and Crazy” ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို ပြသသွားမှာပါ။
Next ရှိသင့်သည်ထက် ပိန်ချုံးကျနေတဲ့ပုံစံကြောင့် မြင်သူတကာကို တအံ့တသြဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် (၆) ဦး »
Previous « ဆုပေးပွဲတက်ရတဲ့အချိန်တွေကို လွမ်းမိကြောင်း သွယ်ဝိုက်ပြီး ‌ပြောပြခဲ့သူလေး Jennie